3 Tora-Nzira kubva ku5 Kiyi kuenda Kunoshamisa Email Kushambadzira | Martech Zone
3 Tora-Nzira kubva ku5 Kiyi kuenda Kunoshamisa Email Kushambadzira
Muvhuro, April 2, 2012 Mugovera, October 25, 2014 Lavon Tembere
Maererano 2012 KushambadziraSherpa Benchmark Survey, makambani akati wandei anogona kuwedzera email yavo bhajeti neinopfuura makumi matatu muzana mugore ra30. Zvisinei, Delivra iri kuona kuti makambani mazhinji achiri kunetsekana neakakosha maitiro eemail - rondedzero chivakwa, zvemukati, kusangana, dhizaini, nezvimwe.
Usawedzere ako mabhajeti eemail pasina kutarisisa kune izvo zvinoda kugadzirisa uye izvo zvisingaite. Tora nguva yekutarisa pane zvakakosha; Idzi ndidzo pfungwa dzekutanga dzinoita yako email kushambadzira chirongwa chinoshamisa. Munguva pfupi yapfuura, Delivra yakaburitsa maitiro, manhamba uye mazano. Pazasi pane matatu anotora-aways:
Gadzira zvemukati zvichibva pane data. Kugadzira zvemukati zvinoenderana zvinogona kuve zvinonetsa kune vatengesi veemail. Gara uchitora data nezvevateereri vako kuti ugadzire zvirimo sezvazvinogona. Tsvaga izvo vateereri vako vanoda kunzwa nekukumbira muongororo kana nzvimbo yekufarira.
Chikamu chinokupa iwe Mugumo paMakwikwi. Mu KushambadziraSherpa 2012 Email Kushambadzira Benchmark Survey, yakataura kuti 95% emakambani aifanira kugadzirisa chikamu chikamu. Usasiyiwe kumashure - tanga kutarisa kugadzirisa yako chikamu ikozvino!
Dhizaini yenhare, nguva. Maererano neshumo imwe chete, 58% yevatengesi veemail havasi kugadzira maemail kuti vape zvakanaka pamafoni efoni. Mafoni efoni ari kuwedzera kufarirwa, saka nei iwe usiri kunge uchigadzira maemail uine izvi mupfungwa?
Tags: Content MarketingDatadelivraEmail MarketingKushambadziraSherpaYeMahara neThebhu KushambadzirazvikamuMaitiro
Iyo Iri Kuwedzeredza Nhare Dhata Spectrum Kuperevedza
5 Zvinhu zveKubudirira Kwekutengesa Kurovera